सम्झनाका असमेल लहर ।
व्यग्र छ मन । मातृभूमी छोडेर विदेशिएको एउटा किशोर जन्मभूमिको माटो छुन जसरी व्यग्र हुन्छ नि, त्यस्तै व्यग्र छ मेरो मन यतिखेर, तिम्रो मनको श्पर्श पाउन ।
मलाई यो पत्र लेखिरहेको समय निकै लामो लागिरहेको छ र मेरा औंलाहरु यति ढिलो चलिरहेका छन् कि, म आफैंलाई कति सरापूँजस्तो भइरहेको छ ।
मलाई किन यसरी व्यग्रताको भूमरीमा आफलिदिएर तिमीचाहिँ टाढा गयौ ? यो प्रश्न पनि त तिम्रो अनुपस्थितिमा कसलाई सोधौं ?
साँच्चै, हामीबीच अझै पनि अपरिचितताको खाडल बाँकी नै छजस्तो लाग्छ । तर ति सबै खाडल नाघेर आत्मियताको गहिरो तलाउमा हामी कहिलेदेखि डुबुल्की खेल्न थालिसकेछौं । सम्झ त, तिमी र मबीच हुने कुराकानीका अंशहरु । हामी हृदयको यति गहिराइबाट एकअर्कालाई आत्मसात गरिरहेछौं कि हावाले खुश्बुलाई आफूमा समाहित गरेर बत्तिरहेछ जस्तै ।
हामीलाई केले एकअर्कामा बाँध्यो ? उत्तर जति दिए पनि अनुत्तरित नै रहनेछ । मनको अपरिमित सीमालाई नाघेर बत्तिने भावनाको भेलको भाका बुझे पनि त्यसको वेगको आँकलन गर्नु असम्भवप्रायः छ, जसरी सुनामीको वेगको अनुमान गर्नु ।
तिमी मलाई आफ्नो हृदयको नजिक राखेर फुरुक्क पाछ्र्यौ । मलाई यति सुन्दर भ्रम दिन्छ्यौ कि त्यो मलाई यथार्थभन्दा पनि यथार्थ लाग्छ । तिमीभित्रको भावनाका असमेल सागरहरुले मलाई यसरी छपक्क छोप्न तयार हुन्छन् कि म कुनै सिनेको दृश्य सम्झन्छु, जहाँ कुनै प्रेमी प्रेमिकाको काखमा सुस्ताएर सिमलको भुवाजस्तै उडन्ते तर कोमल कुरा गरिरहेको छ ।
हामीले कति नै भेटेका छौं र ? तर हरेक भेटका बेला म तिम्रो मायामा निथ्रुक्क भिजेको हुन्छु र उस्तै साउने झरीले निथ्रुक्क भिजेको तिम्रो तस्वीर अहिले पनि मेरो कल्पनामा मुस्कुराइरहेको छ । जब हामी छुट्टिन्छौं नि, म एउटा अर्को अनिश्चित भेटको बोझले थिचिएको हुन्छु । के तिमीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ ?
हामीले अहिलेसम्ममा औपचारिकताका सिमाहरु मेटाएका छौं, सम्बोधनको तगाराहरु भत्काएका छौं भेलले खोलाको पुरानो बाटो भत्काएजस्तै । आत्मियताको एउटा उत्कर्षतिरको हाम्रो यात्रामा औपचारिकताले अब कुुनै अर्थ राख्लान् जस्तो पनि लाग्दैन मलाई ।
यो पत्र टुंग्याउँदै गर्दा तिमीले मलाई उत्तर लेखिरहेको चित्र आँखामा नाचिरहेको छ । सुन्दर औंलाहरु बीचमा कलम नाचिरहेको छ, जसले मसीलाई मेरो हृदयमा तरंग फैलाउने शब्दमा अनुवाद गरिरहेको छ । म तिम्रो हृदयमा उर्लिएका भावनाको अनुवाद हेर्न चाहन्छु, जहाँ मेरा भावनामा उठिरहेका प्रश्नको मीठो जवाफ हुनेछ । भन त, मलाई कति पर्खाउँछ्यौ ?
उही तिम्रो प्रियतम
Letter Love PriyatamaSeries